Nail Polish (2021) | MM Movie Store
ဗီးရျဆငျးက အရငျတုနျးက ကရျှမီးရျမှာ သူလြှို တဈယောကျ အဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ပွီးအလုပျ ထှကျလိုကျပါတယျ။သူက ကလေးတှကေို အားကစားသငျကွားပေးပွီး ကလေးတှကေလညျး သူ့ကို အရမျးခဈြကွပါတယျ။နစေ့ဉျကလေးတှနေဲ့ပဲအခြိနျကုနျရငျးသူ့ဘဝကို ပြျောပြျောပါးပါးကွီးဖွတျသနျးနတေယျ…
ဒီလိုပဲနပေမေဲ့ သူ့ဘဝကွီးရဲ့ကံဆိုးမိုးမှောငျက ရောကျရှိလာပါတော့တယျ… ကလေးနှဈယောကျ မီးရှို့သတျခံထားရပွီးဒီကိစ်စရဲ့တရားခံက ဗီးရျဆငျးဖွဈတယျဆိုပွီး တရားစှဲခံရပါတော့တယျ…အိမျပိုငျရှငျကလညျး သူကိုယျတိုငျွဖဈနတေဲ့အပွငျအခွအေနေ ရှုထောငျ့စုံက သူဟာတရားခံလို့ညှနျပွနတေဲ့အတှကျ ဗီးရျဆငျးတဈယောကျဒုက်ခအကွီးအကယျြရောကျနပေါတယျ….
သူကိုယျတိုငျလညျးကလေးတှသေဆေုံးမှုအတှကျ အံအားသငျ့ပွီး သှေးပကျြနတေယျ..တရားခံကဘယျသူလဲ..တရားသူကွီးတှနေဲ့ရဲအဖှဲ့ကရော စဈမှနျတဲ့တရားခံကိုဖျောထုတျနိုငျပါ့မလား…India မှုခငျးကားအလနျးကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှအေတှကျတော့ လကျမလှတျသငျ့ပါဘူး
ဗီးရ်ဆင်းက အရင်တုန်းက ကရ်ှမီးရ်မှာ သူလျှို တစ်ယောက် အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအလုပ် ထွက်လိုက်ပါတယ်။သူက ကလေးတွေကို အားကစားသင်ကြားပေးပြီး ကလေးတွေကလည်း သူ့ကို အရမ်းချစ်ကြပါတယ်။နေ့စဉ်ကလေးတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ရင်းသူ့ဘဝကို ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးဖြတ်သန်းနေတယ်…
ဒီလိုပဲနေပေမဲ့ သူ့ဘဝကြီးရဲ့ကံဆိုးမိုးမှောင်က ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်… ကလေးနှစ်ယောက် မီးရှို့သတ်ခံထားရပြီးဒီကိစ္စရဲ့တရားခံက ဗီးရ်ဆင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီး တရားစွဲခံရပါတော့တယ်…အိမ်ပိုင်ရှင်ကလည်း သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်အခြေအနေ ရှုထောင့်စုံက သူဟာတရားခံလို့ညွှန်ပြနေတဲ့အတွက် ဗီးရ်ဆင်းတစ်ယောက်ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်နေပါတယ်….
သူကိုယ်တိုင်လည်းကလေးတွေသေဆုံးမှုအတွက် အံအားသင့်ပြီး သွေးပျက်နေတယ်..တရားခံကဘယ်သူလဲ..တရားသူကြီးတွေနဲ့ရဲအဖွဲ့ကရော စစ်မှန်တဲ့တရားခံကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပါ့မလား…India မှုခင်းကားအလန်းကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ လက်မလွှတ်သင့်ပါဘူး